Musangano weZvicherwa Unotanga muBulawayo
Gumiguru 04, 2017
Vazhinji vanochera zvicherwa mumaruwa havana zvitambi zvekuita basa, izvo zvinozoita kuti vachere zviri kunze kwemutemo
Musangano wechitanhatu wemazuva maviri wezvicherwa, weZimbabwe Alternative Mining Indaba watanga muBulawayo neChitatu uchibatanidza vehurumende, vemigodhi, vemasangano akazvimirira pamwe nevemumatunhu ane zvicherwa.
Musangano uyu wakarongwa nemasangano anosanganisira reZimbabwe Environmental Law Association, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, neZimbabwe Council of Churches, uye uri kuitwa pasi pedingindira rinokurudzira kuchengetedzwa kune hungwaru kwezvicherwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Evironmental Law Association, VaMutuso Dhliwayo, vanoti gore rino vakakokawo vemasangano akazvimirira pamwe vemumatunhu ane zviwanikwa nekuti kubva pakaparurwa musangano uyu muna 2012, mapoka aya aisiiwa kumisangano iyi.
"Saka isu takazo creator a platform yekuti ma communities nema civil society organisations vasangane vachitaura ma issues aripo mu mining sector," VaDhliwayo vanodaro.
Musangano wegore rino uyu, uyo unopa mukana wekuti vemapoka ose aya vasangane uri kukurukura nyaya dzinosanganisira mitemo inobata vanochera zviwanikwa uye kuzadzisa tarisiro dzenharaunda dzinenge dzichiwanikwa zvicherwa pamwe neveruzhinji.
Vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vanosanganisira anoti MDC-T, Zanu PF neNational People’s Party, vari kupindawo musangano uyu, uyo uri kupindwawo nevamwe vanobva kuMozambique, South Africa, Botswana neTanzania.
VaDhliwayo vanoti vanhu vanodarika mazana matatu vapinda musangano uyu muzuva rekutanga.
Vanotiwo panopera musangano uyu, vanozotora zvinenge zvabuda kuti ndizvo zviri kunetsa muboka rezvicherwa voenda nazvo kune vanogadzira mitemo kuti zvigadziriswe.
Hurukuro naVaMutuso Dhliwayo